St. Maarten: Ireo mpitsidika vita vaksiny feno dia tsy mila fitsapana COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Sint Maarten Breaking News » St. Maarten: Ireo mpitsidika vita vaksiny feno dia tsy mila fitsapana COVID-19
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Sint Maarten Breaking News • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
St. Maarten: Ireo mpitsidika vita vaksiny feno dia tsy mila fitsapana COVID-19.
Nambaran'ny minisitra Omar Ottley nandritra ny famelabelarana an-gazety fa manomboka ny 1 Novambra 2021, ny olona vita vaksiny feno dia tsy mitaky fitiliana COVID-19 intsony hiditra ao St. Maarten.
Mihatra ny lalàna vaovao ho an'ireo mpandeha izay vita vaksiny feno amin'ny vaksinin'ny RIVM sy ny fikambanana WHO.
Ny vesatry ny viriosy amin'ny olona iray vita vaksiny tanteraka, izay voan'ny COVID-19, dia mihena haingana kokoa noho ny olona tsy vita vaksiny.
Ao St. Maarten, misy 1.6% ny taham-pahafatesana voarakitra, izay 0.04% no vita vaksiny tanteraka.
Ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka, ny fampandrosoana ara-tsosialy ary ny asa, Omar Ottley dia nanambara nandritra ny fampahalalana nataony tamin'ny mpanao gazety fa hatramin'ny 1 Novambra 2021 dia tsy mila fanandramana COVID-19 intsony ny olona vita vaksiny. St. Maarten.
Izany dia ho an'ny mpandeha izay vita vaksiny tanteraka amin'ny vaksiny nankatoavin'ny RIVM sy ny fikambanana OMS ihany. Nambaran’ny minisitra hatrany fa efa ela no nandinihan’ny minisitera izany, ka noho ny fikarohana voaporofo dia nanapa-kevitra ny hiroso amin’izany.
Ny fikarohana dia naneho fa ny vesatry ny viriosy amin'ny olona iray vita vaksiny tanteraka, izay voan'ny COVID-19, dia mihena haingana kokoa noho ny olona tsy vita vaksiny. Midika izany fa na dia misy aza ny fahatapahan-jiro amin'ny trangan'ny olona vita vaksiny tanteraka, dia ambany dia ambany ny fahafahan'ireo olona ireo hanaparitaka ny viriosy na ho marary mafy.
Nambaran'ny Minisitra fa ny vaksiny dia mamela ny vatanao hiady amin'ny viriosy rehefa mivoaka avy ao amin'ny orona sy mankany amin'ny lalan-drà ny aretina. Sorohina ny aretina mafy amin’ny fanaovana vaksiny, satria ho vonona kokoa hiady amin’ny viriosy ny vatanao.
On St. Maarten, misy 1.6% ny taham-pahafatesana voarakitra, izay 0.04% no vita vaksiny tanteraka. Ny isan-jato mitovy amin'izany dia voarakitra ho an'ny isan'ny hopitaly vita vaksiny tanteraka. "Izany dia mampiseho fa tena mandaitra ny vaksiny ary afaka mandroso amin'ny famelana ireo olona vita vaksiny tanteraka hiditra tsy mila fitsapana isika", hoy i Ottley.
Nanambara ny minisitra Ottley fa ny drafitra fohy hataony dia ny hampivelatra ny COVID-19 fanarenana Digital COVID-19 Certificate (DCC), izay ahafahan'ny olona manoratra ny aretiny taloha ary mampiseho porofon'ny tsimatimanota voajanahary.
Mariho fa tsy miova ny fepetra takiana amin'ny olona tsy vita vaksiny, raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho ny tranokalan'ny Governemanta.
Azafady mba jereo ny lisitry ny vaksinin'ny OMS ekena etsy ambany:
Pfizer / BioNTech (Eken'ny FDA)